Waa kuma taajirka uu Mareykanku doon doonayo ee hubka halista ah ka iibiyay Saadaam Xuseen? | Berberanews.com
Home WARARKA Waa kuma taajirka uu Mareykanku doon doonayo ee hubka halista ah ka...
Waa kuma taajirka uu Mareykanku doon doonayo ee hubka halista ah ka iibiyay Saadaam Xuseen?
Muddo 26 sano ah, ganacsadaha u dhashay dalka Chile ee lagu magacaabo Carlos Cardoen ma uusan aadin dibadda, wuxuuna ka cabsanayay in la xiro.
Ninkan maal qabeenka ah waxaa si weyn u doon doonaya dowladda Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay inuu si sharci darro ah Mareykanka uga soo dhoofistay qalabka lagu sameeyo bambooyinka halista ah ee loo yaqaanno zirconium.
Qalabkaas ayaa la sheegay inay shirkaddiisa sii hormarisay kana dhigtay Bambooyinka wax gumaada ee la yiraahdo cluster-ka, isagoo markaas kadibna ka iibiyay maamulkii madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saadaam Xuseen sannadihii 1980-meeyadii iyo 1990-meeyadii.
Sanadkii 1993-kii, booliska adduunka ee loo yaqaanno Interpol ayaa soo saaray amar lagu soo xirayo Mr Cardoen.
Balse 22-kii bishii Maarso ee lasoo dhaafau unbey waaxda caddaaladda ee dowladda Mareykanka ugu dambeyn soo saartay codsi rasmi ah oo ay ku dlabaneyso in gacanta lagu soo dhigo ganacsadahaas 77 jirka ah.
Maxkamadda sare ee dalka Chile ayaa amar ku bixisay in ninkan xabsi guri lagu xiro, iyadoo muddo 60 maalmood ah u qabatay dowladda Mareykanka sidii ay u maareyn lahayd gacan galintiisa.
Mr Cardoen ayaa dhankiisa ku adkeystay in bambooyinka uu Ciraaq ka iibiyay iyadoo ay Mareykanku si buuxda uga war qabeen ayna oggolaayeen.
Qareennadiisa ayaa hadda u dagaallamaya inay Ishortaagaan in Mareykanka loo gacan galiyo.
Tan iyo Markii ay warqadda lagu xirayo kasoo baxday booliska adduunka, Mr Cardoen ayaa waqtigiisa iyo hantidiisaba u weeciyay sidii uu ugu hormarin lahaa gobolka uu kasoo jeedo ee Colchagua valley, isagoo sidoo kalena kharash badan ku bixinayay sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka dalkiisa.
Wiil uu dhalay ayaa sheegay in aabihiis uu wax badan u qabtay magaaladiisa, uuna diyaar u yahay inuu dadaal usii sameeyo.
Dowladda Mareykanka ayaa hadda laga dhowrayaa inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo in dowladda Chile ay kusoo wareejiso ninkan eedeysanaha ah.
Xukuumaddii uu hoggaaminayay Saadaan Xuseen ee dalka Ciraaq ayaa la burburiyay sanadkii 2003-dii, kadib markii uu Mareykanka weerar ku qabsaday dalkaas.
Ninkii CIA u waraystay Saadaam Xuseen markii la qabtay
Ciidanka Mareykanka ayaa ugu dambeyn gacanta dhigay Saadaan Xuseen, waxaana markii dambe lagu fuliyay xukun daldalaad ah.
Markii gacanta lagu dhigay madaxweynihii hore ee Ciraaq, waaxda sirdoonka Maraykan ee CIA waxay u baahatay khabiir haybtiisa xaqiijin kara oo su’aalo weydiin kara si xog looga helo. Qofkaas wuxuu ahaa John Nixon.
Nixon wuxuu darsayey Saadaam tan iyo markii uu CIA ku biiray sanadkii 1998-kii.
Kaalintiisa ayaa ahayd inuu xog waafi ah ka uruuriyo hogaamiyeyaasha dunida, oo uu taxliiliyo waxa madaxdaas adkaynaya, wuxuuna uga warramay barnaamijka BBC ee BBC’s Victoria Derbyshire programme.
Wuxuu joogay Ciraaq markii hogaamiyaha xukunka laga tuuray laga helay god ku ag yaallay beer ku tiillay magaaladii uu ka soo jeeday ee Tikrit.
Markii ay akhbaartaas timid, Maraykanku wuxuu u baahday inu isaga xaqiijiyo haybtiisa.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionGodkii uu Saddan Xuseen ku dhuumanayay markii la qabtay
Waxaa jiray warar la isla dhex marayey xilligaas oo ah in Saddaam uu isbeddel xagga jirka ah ku dhacay, laakin Nixon oo CIA ka tegey 2011 wuxuu yiri ” shaki iigama jiro inuu isaga yahay markii aan arkay”.
“Markii aan hadalka ku billaabay wuxuu ii eegay sidii aan muuqaalkiisa ku arkay buug kiisa ah oo miiska xafiiska muddo sanooyin ah ii saarnaa” ayuu yiri.
Nixon wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee waraysi dheer oo maalmo qaatay la yeesha Saadaam. Wuxuu qoray buug la magac baxay Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionMarkii Saddam Xuseen la qabtay ka dib
Wuxuu sheegay in dhinaca insaannimada ee uu ka arkay Saadaam uu aad uga soo horjeeday masawirkii ay warbaahinta Maraykanku ka bixiyeen.
“Wuxuu ka mid ahaa dadka shaqsiyadoodu soo jiidashada leedahay ee aan la kulmay” ayuu yiri.
“su’aal kasta oo aan weydiiyo, mid kale ayuu iigu beddelayey” ayuu yiri. Arrinta ugu muhiimsan oo uu wax ka weydiinayey ayaa ahayd hubka aadka wax u gumaada, taasoo ahayd sababta ugu weyn ee Maraykanka iyo UK ay dagaalka ula galeen.
Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGESImage captionSanadkii 2016-kii Saddam waxaa lagu helay in uu galay dambiyo aadanaha ka dhan ah
Nixon wuxuu sheegay inuu ka qajilo wixii Ciraaq ka dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray Saadaam Xuseen.
Wuxuu sheegay in maamulkii Bush uusan wax fiiro ah siinin waxa imaan kara marka Saadaam meesha laga saaro. Dhanka soo shaac bixidda kooxaha xagjirka ah, sida kooxda loogu yeero dawladda islaamiga, ayuu sheegay inuu rumaysan yahay in Ciraaq ay wanaagsanaan lahayd haddii uu Saadaam sii joogi lahaa.
Hadalka caynkaas ah waxaa ku gacan sayray ra’iisul wasaarihii hore ee UK Tony Blair oo dalka hogaaminayey wakhtigii duullaanka la qaadayey.
Previous article“Waxaan idin sheegaya cadowgaaga cadowgii waa saaxiibkaa'”Faysal Cali-waraabe
Next article“”Farmaajo wuxuu sameystay Jabhado hubeysan oo rag la garanayaa ku jiraan.” Wasiir M Kaahin